အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Editor's Notes » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၄
Posted by kai on Feb 3, 2014 in Editor's Notes | 24 comments
Jan 31, 2014 2:08pm
Posted on: 8:09 pm, February 3, 2014, by CNN Wire
အဲဒါကနေ.. အမေရိကားမြေမှာ..အမေရိကန်တွေ.. ဝတုတ်တွေဖြစ်လို့.. ဖြစ်ယုံတင်မက.. ဝတာကနေတွဲပါလာတဲ့.. ရောဂါပေါင်းစုံနဲ့.. နပန်းသတ်ကြပြီးသကာလ… အဲဒီ ဆိုးသွားတဲ့ကျမ်းမာရေးလိုအပ်ချက်တွေအတွွှက်.. အစိုးရဘက်ဂျက်ငွေတွေ.. ဘီလီယန်ချီဆုံးရှုံးပြီးသကာလ.. သကြားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့..” ရှယ်အခွန်”ချဖို့လုပ်ကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း…
တကယ်က သာမန်ထက်အလွန်အမင်းဝသူတွေကို… ကားခ..ရထားခ..စီနင်းခ..ဝန်ဆောင်ခတွေမှာ.. “ရှယ်ကြေး”ချဖို့ကောင်းတယ်..
မှတ်ချက်။ ။ ဒို့မြို့က..ဖက်ဖက်ကက်မပါ..
ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၄ နာရီက နေပြည်တော် စည်ပင်ဧည့်ရိပ်သာ ၂ တွင် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ၈၈ ကျောင်းသား ကိုမင်းကိုနိုင် ကိုကိုကြီး ကိုဂျင်မီ ကိုမြအေး ကိုပြူံးချို တို့လာရောက်တွေ့ဆုံနွေးခဲ့ကြသည်။
၈၈ကိုကိုင်လှုပ်ခဲ့သူ(အသက်ရှင်နေသူ) အားလုံးလိုလို.. အတွေ့အကြုံပညာ..ဗဟုသုတ တပုံတပင်နဲ့.. ပြည်တွင်းရောက်နေ..စုမိနေ…ကြပြီပဲ..။
“ဘေးဟစ်အော်တွေဘေးချိပ်လို့.. ဘစ်ချိန်းတခုကို..အဘ.. မြင်လို…”
အဓိပတိ သတင်း ဂျာနယ် သတင်းထောက်တစ်ဦးမှ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ခင်ညွှန့်အား ပုဂံရှေးဟောင်းဘုရားများ ရွှေသင်္ကန်းကပ် ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းခဲ့ခြင်းကြောင့် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနစ်များ ပျက်ဆီးခဲ့ရသည်ဟု ဗိသုကာပညာရှင်များက ပြောဆိုခဲ့ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည့်အပေါ် ကတောက်ကဆဖြစ်ခဲံ့..
အောက်ကသတင်းအရ.. မြန်မာပြည်မှာ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း အက်ဥပဒေကို ပြင်တဲ့ဥပဒေရှိနေတာပဲ..။
.. ဘိုချုပ်ကြီးခင်ညွှန့်ကို အဲဒီဥပဒေနဲ့အရေးယူဖို့ကောင်းတယ်..။
ရှေးဟောင်းစေတီ ပုထိုးများကို ကြိုတင် ခွင့်ပြုချက် မတောင်းပဲ ပြုပြင်မှုတွေ လုပ်ပါက အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ့် သတင်း
ရှေးဟောင်းစေတီ ပုထိုးတွေကို ယဉ်ကျေးမှု ဝန်ကြီးဌာန ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ အမျိုးသား ပြတိုက်ဦးစီး ဌာနထံသို့ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံပဲ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေ ပြုလုပ်ပါက အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ အခုအခါ ဒေသတစ်ချို့တွေမှာတော့ ရှေးဟောင်းစေတီ ပုထိုးတွေကို ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မတောင်းခံပဲ ဘုရားစေတီရဲ့ ဌာပနာပစ္စည်းတွေကို တူးဖော်ရယူခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းခြင်း၊ ထိခိုက်ချို့ယွင်းစေခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း၊ အသွင်ပျက်စေခြင်း၊ ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေခြင်း၊ တနည်းနည်း ဆောင်ရွက်တာစတဲ့ ဥပဒေမဲ့ ကျူးလွန်လျက် ရှိနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ဟာ ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်းကို ထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် (၁၉၅၇) ခုနှစ်နဲ့ (၁၉၆၂) ခုနှစ် ရှေးဟောင်းဝတ္ထုပစ္စည်း အက်ဥပဒေကို ပြင်တဲ့ဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ (၁၉၆၂) ခုနှစ် ရှေးဟောင်းဝတ္ထု ပစ္စည်းများ အက်ဥပဒေကို ပြင်တဲ့ ဥပဒေပုဒ်မ (၈) အရ ရှေးဟောင်းဝတ္ထု ပစ္စည်းများ အက်ဥပဒေပုဒ်မ (၂၃)၊ ပုဒ်မခွဲ(၁)အဖြစ် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ကြောင်းနဲ့ ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကို လိုက်နာမှု ပျက်ကွက်သူတွေကို တည်ဆဲဥပဒေနဲ့အညီ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ ရှေးဟောင်းသုတေသနနဲ့ အမျိုးသားပြတိုက် ဦးစီးဌာနရဲ့ ကြေညာချက်အရ သိရှိရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
Read more: http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2552177/Forget-Internet-soon-OUTERNET-Company-plans-beam-free-wi-fi-person-Earth-space.html#ixzz2sbssaWTB
မြန်မာ့အင်တာနက်ပရိုဗိုက်တာတွေ.. ဗိုက်နာဖို့ပြင်ပေါ့..။ သိပ်မလိုတော့ဘူး.. ၂၀၁၅..ဂျွန်လတဲ့..
သိပ်မကြာတော့တဲ့…ဆယ်စုနှစ်လွန်တွေမှာ.. လူသားတယောက်က.. အင်္ဂါဂြိုလ်ပေါ်ကနေ.. အဲဒီကမ္ဘာဆိုတဲ့ဂြိုလ်မှာ.. ငါ့အမျိုးတွေနေတယ်ကွဆိုပြီး.. လက်ညိုးညွှန်ပြောနိုင်တော့မှာပါ..။
အဲဒီအတွက်.. အခုအပေါ်ကဓါတ်ပုံက.. ပထမဆုံးသက်သေပြချက်ပဲ..။
မြန်မာပြည်မှာတော့.. မြန်မာ့မြေမှာမွေးသူတွေကို.. မြန်မာ့မြေပေါ်မှာမွေးထားသူတွေကပဲ.. တမူးသာလို့.. ” နိုင်ငံခြားသားကွ”..” အေလီယန်ကွ..” လုပ်နေကြတုံး…
တိုင်းရင်းသားဆိုတာ က ပါသေးးးး
US EXIM bank ready to offer financing for companies exporting to Myanmar
Updated: February 6, 2014 – 10:55 AM
WASHINGTON — The U.S. government export credit agency says it’s ready to provide financing for American companies exporting to former pariah nation Myanmar.
The bank can now provide export-credit insurance, loan guarantees and direct loans for exporters.
အနော်လည်း သဂျီ းသမက် လုပ်မှာ..
နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်တွင် လူမျိုးနှင့် ဘာသာအမည် ထည့်သွင်းတော့မည် မဟုတ်ဟု ဦးခင်ရီဆို
လူမျိုး သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပွားနေသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၌ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီး နောက်ပိုင်း နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်များတွင် လူမျိုးနှင့်ဘာသာ ဖော်ပြချက်များကို ထည့်သွင်း ဖော်ပြတော့မည် မဟုတ်ကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးခင်ရီက ပြောကြားသည်။ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယင်းစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည် ဆိုသော်လည်း အချိန်ကာလ အတိအကျကို ပြောဆိုခြင်း မရှိပေ။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာအမည် ထည့်သွင်းဖော်ပြမည် မဟုတ်သော်လည်း နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ် ကိုင်ဆောင်သူ၏ လူမျိုးနှင့် ဘာသာကို မှတ်တမ်းအနေနှင့် ဝန်ကြီးဌာနက သိမ်းဆည်းထားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်ရီက ဆိုသည်။ “နိုင်ငံတကာမှာလည်း မှတ်ပုံတင်မှာ လူမျိုးဆိုတာ မထည့်ဘူး။ ဘာသာ ဆိုတာလည်း မထည့်ကြဘူး။ နောင်မှာ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း လူမျိုး၊ ဘာသာ မထည့်တော့ဘူးလို့ ယာယီ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်” ဟု ၎င်းကပြောဆိုသည်။ နိုင်ငံတကာတွင် သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာ၌ လူမျိုး၊ ဘာသာစာရင်းများကို ကောက်ယူခြင်း မရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် အငြင်းပွားမှုများ ရှိနေသဖြင့် ယင်းပြဿနာများကို ဖြေရှင်းရန် လာမည့် ပြည်လုံးကျွတ် သန်းခေါင်စာရင်းတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာစာရင်းများကို ထည့်သွင်း ကောက်ယူမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးခင်ရီက ထပ်မံပြောကြားသည်။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ ထည့်သွင်းနေသည့် ကိစ္စကို တိုင်းရင်းသားများ၏ သဘောဆန္ဒအရသာ လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ အမျိုးသား ကြန်အင် လက္ခဏာကို မဖျောက်ဖျက် သင့်ကြောင်း မွန်ဒေလုံးဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးနိုင်ငွေသိန်းက ဆိုသည်။ “ဘယ်သူမှ နစ်နာမှု မရှိအောင် လုပ်ဖို့လိုတယ်။ မဟာဝါဒီ မဆန်ဖို့လိုတယ်။ ဒီအချက်က သိပ်အရေးကြီးတယ်” ဟု ၎င်းကမှတ်ချက်ပေးသည်။ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကတ်တွင် လူမျိုး၊ ဘာသာ အမည်များကို ဖော်ပြချက် မထည့်တော့ဟု ဆိုသည့်ကိစ္စသည် ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်နေသဖြင့် ပြည်သူလူထုက ရွေးကောက် တင်မြှောက်ထားသည့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အဆုံးအဖြတ် ရယူပြီးမှာ လုပ်ဆောင်သင့်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခက်ထိန်နန်က အကြံပြုသည်။ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေး ပါတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အေးမောင်ကမူ “သတ္တိရှိရင် နိုင်ငံကိုပါ ဖြုတ်လိုက်ရင် မကောင်းဘူးလား မေးချင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး ၁၃၅ မျိုး ရှိကြောင်း လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသည်။
မိဘအမည်တွေများပါနေရင်လည်း.. အဲဒါကိုပါဖြုတ်ပစ်ဖို့ ဆန္ဒတင်ပါကြောင်း..၊
အဖေဘာကောင်.. အမေဘယ်သူဆိုတာကြီးကြည့်.. လူမျိုး.. ကိုးကွယ်ရာတွေကြည့်..လူအချင်းချင်း.. အဆင့်ခွဲ.. ခွဲခြားဆက်ဆံကြလို့ဖြစ်ပါကြောင်း..
လူမျိုး..ဘာသာ ဖေါင်ဖြည့်စဉ်ကတည်းကမမေးပါ..။ ဖြည့်စရာလည်းမလိုပါ..။ အစိုးရက မှတ်တမ်းဆိုပြီးသိမ်းလည်းမထားပါ..။
ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးချုပ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးဟု သတင်းထွက်
Browse › Home › မြန်မာ့သတင်း » ပြည်ခိုင်ဖြိုးရုံးချုပ် အရောင်းအဝယ်ဖြစ်ပြီးဟု သတင်းထွက်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တက္ကသိုလ်ရိပ်သာ လမ်းသစ်ရှိ အမှတ် ၁၅၅/၁၅ရ (ယခင်) ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီ ဌာနချုပ်ရုံးကို ပြည်တွင်း ကျောက်မျက်ရတနာ သူဌေးတစ်ဦးက အခြားမြေကွက် အပါအဝင် တန်ဖိုးငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၈သိန်းဖြင့် လေလံ အောင်မြင်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းဌာနချုပ်ဟောင်း ရောင်းချရငွေကို ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ မဲဆွယ် စည်းရုံးရေးတွင် ထည့်သွင်း အသုံးပြုသွားမည် ဖြစ်သည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ပါတီတွင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လျက် ရှိသည်။
အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ နိုင်ငံပိုင် ထုခွဲရောင်းချရေး အဖွဲ့မှ ယင်းပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ ဌာနချုပ် ရုံးဟောင်း အပါအဝင် အခြားမြေကွက် တချို့ကို လေလံတင် ရောင်းချ ခဲ့ရာ ပြည်တွင်း ကျောက်မျက် ရတနာ သူဌေးတစ်ဦးက တန်ဖိုးငွေကျပ် သိန်းပေါင်း ၈ သိန်းဖြင့် အပြတ်အသတ် လေလံ အောင်မြင်ခဲ့ သည်ဟု ပြည်ခိုင်ဖြိုး ဗဟိုကော်မတီဝင်များနှင့် နီးစပ်သူတချို့က ပြောသည်။ အဆိုပါ ပါတီဌာနချုပ် ရောင်းချရခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ရန်ကုန်တိုင်း ပါတီဌာနချုပ် ရုံးဟောင်းသို့ မြန်မာသံတော်ဆင့်မှ သွားရောက် မေးမြန်းခဲ့ရာ ““ကျွန်တော် ဒီကိစ္စကို မသိဘူးခင်ဗျ။ မရောင်းပါဘူး။ အခုဒီရုံးက လူတွေကို နေပြည်တော် ဌာနချုပ်ကို ခေတ္တပြောင်းထားတယ်။ နောက်မှ ရန်ကုန်ကို ပြောင်းဖို့ စီစဉ်မှာပေါ့။ ဒါလည်း မသေချာပါဘူး””ဟု ပါတီဌာနချုပ် ဟောင်းရှိ အဆောင်မှူး ဦးအောင်ဆွေက ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့သည်။
ဒေါ်လာနဲ့ဆို.. သန်း၈ဝပေါ့.. ။
မြန်မာပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာ.. ငွေရှင်တွေဟာ..သူတို့စုထား.. ရထားတဲ့ငွေတွေကို..ဘယ်မှာရင်းနှီးမြုတ်နှံရမယ်မသိ.. မြုတ်နှံကစားစရာ.. စတော့ရှယ်ယာ..ငွေကြေးဈေးကွက်မရှိလို့လို့.. ယူဆမိတယ်..။
ထိုမျှကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းဖြစ်သော်လည်း တနိုင်လုပ်ငန်းလည်း မလုပ်နိုင်၊ စက်ရုံအဖြစ်လဲ မလုပ်နိုင်၊ အရက်နှင့်ဆေးလိပ်လုပ်ငန်းများသာ တစ်နိုင်လုပ်ငန်း၊ စက်ရုံလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်နေကြပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု ကော်မရှင်က လိုင်စင်ချပေးလိုက်သော ပြည်ပရင်းနှီးမြှတ်နှံမှုများတွင် နွားနို့၊ နို့ဆီ စက်ရုံ ရင်းနှီးမြှတ်နှံမှု ရှိမည်မထင်ပါ။ အရက်၊ဘီယာနှင့်ဆေးလိပ်စက်ရုံ မြောက်များစွာ လိုင်စင်ချပေးလိုက်သောကြောင့် ရင်းနှီးမြှတ်နှံကော်မရှင်ကိုပင် အသစ်ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းလိုက်ရရှာသည်။ မဟုတ်တာ အတောမသတ် ဆက်ကာ၊ ဆက်ကာလုပ်နေသူများကို လိုက်တားဆီးနေရခြင်းကလည်း အစိုးရသစ်အတွက် အလုပ်ကြီးတခု ဖြစ်နေသည်။
ထိုသို့ ကျယ်ပြန့်လာသည့် ဒီဘိတ်နှင့် ပတ်သက်၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အရက်နှင့်ပတ်သက်၍ ကျမ်းပြု ပညာရှင်ဖြစ်သူ ဆရာမူးရစ်ညွန့်(ကောက်ညှင်းမြေ) ဆွေးမြေ့စွာ “လူသားဆန်မှုနဲ့ ကိုယ်ချင်းစာတရားကို် ဟောဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မရှာဖွေတော့ဘူး” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျွန်တော်က အရက်လည်းမသောက်ရန်၊ နွားနို့သောက်ရန်ကို ထောက်ခံရေးသားပါသည်။ အားမလျှော့ပါ။ မိထ္ထီလာ၊ပျော်ဘွယ်၊ ပျဉ်းမပင် စသည့်ဒေသများစွာမှ မလိုင်မုန့်လုပ်ငန်း၊ ပြည်တွင်းမှ လဘက်ရည်ဆိုင်များအတွက် ဒေသချက်နို့ဆီများကတော့ ဆက်လက်ရှင်သန်နေဦးမည်။ မကြာမီ အခွန်ကောက်ခြင်း စနစ်ကောင်းများကြောင့် ပြည်ပမှ ပြည်တွင်းအရည်သွေးကို မမှီသော နွားနို့ထုတ်ကုန်များ တင်သွင်းမှုရပ်သွားမည်။ လယ်ယာထွက်ကုန်စက်မှုလုပ်ငန်း စက်ပစ္စည်းများ အခွန်မဲ့၊ လွယ်ကူစွာတင်သွင်းခွင့်ရလာမည့်နေ့သည် သိပ်မဝေးတော့ပါ။ ပြည်တွင်လယ်ယာ ကုန်ချော၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ အရှိန်အဟုန်မြင့်မားစွာ ပေါ်လာတော့မည်ဟု မျှော်လင့်နေပါသည်။ လက်ရှိအခြေအနေတွင် အသက်ငင်နေသော ပုဂ္ဂလိကစက်ရုံ အသေး၊ အလတ်များစွာ ခက်ခဲစွာ ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါဦးမည်။ လယ်ယာ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများကို တရုပ်၊ ဗီယက်နမ်၊ ထိုင်းနိုင်ငံများကဲ့သို့ ဗဟိုအစိုးရ၊ ပြည်နယ်အစိုးရများက ထောက်ပံ့ငွေပေးရန် မျှော်လင့်နေဆဲ ဖြစ်သည်။
– See more at: http://moemaka.com/archives/35888#sthash.vuRCssHc.dpuf
လူနေမှုစနစ်ကိုပြင်ချင်ရင်.. အိုင်ဒီယာလော်ဂျီ ဓလေ့ယဉ်ကျေးမှုကနေစပြင်ရတယ်..။
…. နွားမွေးသူ(တနည်းအားဖြင့်)နွားသားစားသူကိုရန်လုပ်နေတဲ့..မြန်မာ့ဓလေ့စနစ်ကြီးကို.. အရင်တိုက်ဖျက်ခြင်းမပြုနိုင်သေးသ၍.. မြန်မာကလေးတွေနွားနို့သောက်ဖို့ဓလေ့.. မလွယ်ရေးချ..မလွယ်လို့.. ထင်မိတယ်..။
နွားအသားရော..နွားနို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းများရောကပါ.. ကလေးငယ်တွေဦးနှောက်ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြီုးတိုးတက်ဖို့အတွက်.. အင်မတန်(အင်မတန်) အရေးကြီးပါတယ်..။
ကုလား.. ဟိန္ဒူတွေဟာ.. နွားသားမစားပေမယ့်.. နို့နဲ့နို့ထွက်ပစ္စည်းတွေစားသုံးကြတာမို့.. သူတို့ဘဝ.. လူနေမှု..အတွေးအခေါ်.. .ဉာဏ်ရည် မကျဆင်းပါ..။
ကော်ပီကက်…အဲ..ကော်ပီနွားမြန်မာတွေကတော့.. နွားသားစားတာတိုက်ဖျက်ရင်း.. နွားသားစားသူရန်လုပ်ရင်းကနေ..
အဲဒါကြောင့်..” နွားမေတ္တာစာ” ဟာ..မြန်မာ့လူနေမှုစနစ်ပြောင်းသွားစေတဲ့.. စကားကြီးတခွန်းပါလို့.. ပြောနေခဲ့တာ..ပြောနေခဲ့တာ..။
How much milk does one cow produce? How often are they milked? What do they eat? Just the facts here.
Number of dairy farms in the United States
Percentage of American dairy farms that are family owned
Average size ofadairy herd in the United States
Gallons of milk produced in the United States each year
US Milk Consumption (Million Lbs) Low Fat Milk Whole Milk
2005 23,913 16,922
2000 23,649 18,646
1995 24,202 19,008
1990 24,509 21,845
1986 21,156 27,123
“စာပေဟောပြောပွဲများအား ပိတ်ပင်ဟန့်တားနှောင့်ယှက်မှုများအပေါ် ၈၈မျိုးဆက် (ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင်းလူ့အဖွဲ့အစည်း)၏ သဘောထား ကြေညာချက်” ထုတ်ပြန်
Myanmar Gazette Feb_Mar 2014 by Myanmar Gazette
ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံ..လျှက်စစ်ထုတ်… ကျောက်မီးသွေးစက်ရုံဆောက်မှာကန့်ကွက်နေတဲ့ မြန်မာများအတွက်ပါ…
Post by Ko Mlm.
တစ်နေ့က ဖေဘုတ်မှာပါတယ်ပြောတယ် ၊
ဒါဆိုရင် ဒီနေရာက ဘုန်းဘုန်း မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်။
ဒီမှာက အရှင်‌ ဇဝန ( ‌မေတ္တာရှင်‌ ‌ရွှေပြည်‌သာ ) ဟောထားတာ ၊
၄ မိနစ် VDO ချုံ့ထားတာ ။
သူကြီးရဲ့ ၁၆ မိနစ် VDO က ၊
မြန်တျန့် Connection နှင့်ဆို တစ်နေကုန် သွားလိမ့်မယ် ။